पुर्व राजा रानीसंगै केकी अधिकारीलाई लाग्यो को*रोना ! ११ जनाको मू**त्यु, को**रोनाको ड*रला*ग्दो रुप नेपालमा (भिडियो हेर्नुहोस) | Public 24Khabar
Home News पुर्व राजा रानीसंगै केकी अधिकारीलाई लाग्यो को*रोना ! ११ जनाको मू**त्यु, को**रोनाको...
फुङलिङ नगरपालिका–९ बुङकुलुङका किक्र्या शेर्पाले बिहीबार ५ रोपनी जमिनमा बन्दा रोपेर सकाएका थिए। १५ दिन लगाएर रोपेको बन्दाको बेर्नालाई शुक्रबार राति परेको असिनाले माटोमै मिलाइदिएको छ।
राति दुई घण्टा हावाहुरीसहित परेको असिनाले बन्दासहित थप ६ रोपनीमा रोपेको आलुबारी बाँझै बनाएपछि उनको परिवार अब के गर्ने भन्ने चिन्तामा छ। राति परेको असिना शानिबार दिउँसोसम्म पनि पग्लिसकेको थिएन।
‘बन्दा नै ५ हजार किलोभन्दा माथि फलाउने योजना थियो। आलु ४ सय मुरीसम्म फल्थ्यो,’ शनिबार असिनाले छियाछिया बनाएको आलुको बोट देखाउँदै उनले भने, ‘हाम्रो जिउने आधार नै सखाप भयो। अब के खाएर बाँच्ने ?’ अन्नपात र तरकारी नष्ट भएपछि गाउँमै भोकमरी लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको अर्का कृषक स्याङ्मु शेर्पाले बताइन्। ‘आलु उत्पादनको हिसाबले बुङकुलुङले जिल्लामा छुट्टै पहिचान बनाएको छ। अब त्यो नै हराउने भयो,’ उनले भनिन्।
असिनाले बुङकुलुङको ६० घरधुरीले करिब ७ सय रोपनीमा लगाएको आलु, बन्दा, जौ र गहुँ सखाप भएको कृषक पासाङरिता शेर्पाको भनाइ छ। ‘असिना त जेठ लागेपछि बर्सेनि पथ्र्यो। तर, मैले थाहा पाइकन यत्रो असिना परेको थिएन,’ पासाङरिता भन्छन्, ‘यो पाली त गाउँ नै अचम्ममा परेका छौं।’ यस वर्ष भने वैशाखको सुरुमै परेर धेरै क्षति पुगेको स्याङ्मुले सुनाइन्।
अहिले आलुको दाना लाग्न थालेको, बन्दाको बेर्ना रोप्ने बेला भएको र गहुँ÷जौ पाक्ने बेलामा सोत्तर पारेको हो। असिना गाउँ छुट्याएर परेको पाशाङरिताले सुनाए। बुङकुलुङको माथिल्लो भागदेखि रामेटारसम्मको पाटोमा असिना परेको तर नजिकको सैसले, सुकेटारमा नपरेको उनको भनाइ छ। शेर्पा जातिको बाहुल्य रहेको यहाँका कृषकले व्यावसायिक रूपमा आलु र बन्दा खेती गर्दै आएका थिए। आलु र बन्दा रोपेको ठाउँमा जोतेर बाली लगाउने विकल्प मात्रै बाँकी रहेको कृषक बताउँछन्
Previous articleअरुको सेवामा ख`टेकी अनिशालाई लग्यो को`रोनाले, भर्खर जन्मेकी छोरी बनिन टु`हुरी हेर्नुहोस्।
Next articleअन्ततः भर्खरै हेर्नुस् सचिन परियारको बावु रु*दै विदाई! हजुरबुबा-आमा र अब सचिन आमा सँगै! Sachin Pariyar (भिडियो हेर्नुहोस)